Wasiir Ku Xigeen – Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda – JSL
Md. Muuse Ibraahim Yuusuf, Wasiir-KuxigeenKa Wasaaradda H. Maaliyadda JSL
Md. Muuse Ibraahim Yuusuf (Selef), waxa loo magacaabay Wasiir-kuxigeenka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda JSL Bishii December 2019, Wasiir Muuse Ibraahim wuxuu kasoo shaqeeyey mudo sideed sano ah wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiid-ka Cirka Somaliland (imika Hay’ada Duulista Hawadda JSL). Waxaanu doorkiisu ahaa balaadhinta iyo horumarinta Gagooyin-ka Diyaaradaha ee Dalka, kuwooda ugu waaweyn sida Hargaysa, Burco iyo Berbera. Md. Muuse Ibraahim Selef wuxuu sidoo kale kusoo shaqeeyey Agaasinka Waaxda Tirakoobka iyo Qorshaynta muda labo sano ah isla Wasaaraddaas.
Md. Muuse ka hor intaanu xukuumadda kusoo biirin, wuxuu kasoo shaqeeyey suuqa gaar ka ah (Private Sector), isagoo Shirkaddo dhawr ah ugu soo shaqeeyey Suuq-gayn iyo IT, sida African Online xafiiskeeda Hargeisa, mudadii u dhaxaysay 2008-kii ilaa 2011-kii.
Wasiir Muuse wuxuu shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaatay Jaamacadda Hargeisa 2012-kii, isagoo diyaariyey culuumta IT-ga (Information Technology), waxaanu hada wadaa diyaarinta shahaadada labaad ee master-ta, taas oo la xidhiidha culuumta Maareynta Gaadiid-ka Hawada macad ku yaal Boqortooyada Ingiriiska oo la yidhaa CILT. Md. Muuse waa shaqsiyad hogaaminta ku wanaagsan, isku xidhka iyo agaasinka hawlaha awood u leh, isla markaana dad la dhaqan fiican leh.